Bigbuy azụmahịa ratings, echiche na arụmọrụ | ECommerce ozi ọma
Bigbuy azụmahịa ratings, echiche na arụmọrụ
Claudi ego | | Dropshipping
Omume dị ọkụ nke afọ ndị a, azụmahịa e-commerce, nke a na-akpọkwa e-commerce. E nwere ọtụtụ ụzọ iji ree ngwaahịa na ịntanetị, ụlọ ọrụ anyị ga-ekwu maka taa, Bigbuy, nwere ọnọdụ dị mkpa na mpaghara ahụ. Ọ bụrụ n’ị bịarute ugbu a, ọ bụ maka na ị na - eso echiche Bigbuy na ọkwa Banyere ha.
O nwere ike ịbụ na ụfọdụ nwere ike ikwenye ma kwenye n'ihe m ga-akọwara gị taa. Ọ ka bụ nyocha onwe onye, ​​ọ bụ ezie na m ga-anwa ịbụ ebumnuche, ọ naghị akwụsị na nhọrọ ikpeazụ na nyocha ga-esite n'aka gị. M na-agba gị ume ka ị ghara imechi onwe gị, ma ghara ime mkpebi naanị site na ebe a, ọ bụ ezie na ọ na-eme ka ọ bụ mmalite. Yabụ, were ya azụmahịa anyị dabere na mkpebi anyị, ka anyi gbadata ahia.
1 Gịnị bụ Bigbuy?
2 Kedu ka Bigbuy si arụ ọrụ?
3 Ọ bara uru?
3.1 Isi ihe na ihu ọma
3.2 Ihe megide
4 Echiche Bigbuy
4.1 Akpa ikpe
4.2 Nke abụọ
Gịnị bụ Bigbuy?
Bigbuy bụ ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ puku ngwaahịa na ngwaahịa, ma nke ahụ na-eme dị ka onye na-eweta ihe Dropshipping, otu n'ime ụdị dị iche iche nke azụmahịa elektrọnik iji ree ngwaahịa "enweghị". Typedị azụmahịa a gụnyere na B2B ugbu a, Azụmaahịa na Azụmaahịa, nke na-esite na azụmaahịa gaa na azụmahịa. Nke ahụ bụ, ụlọ ọrụ na-enye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, mana ọ bụghị maka ndị ahịa ikpeazụ. Ọtụtụ mgbe, ụlọ ọrụ telematics.
E kere Bigbuy na otu ụlọ ọrụ nwere isi obodo Spanish, na-eburu n’uche ịghọ ebe kasị mma n’ọdụ ụgbọ okporo ígwè na Europe. Loglọ ọrụ ya dị na Valencia, ebe nrụọrụ weebụ ya na-egosi ike ịbụ ụlọ ọrụ na-eto eto, yana ndị ọrụ ruru eru nke ukwuu, na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ.
Ha nwere ọtụtụ puku ndị ahịa, site na ebe a, e nwere ọtụtụ puku echiche banyere ha. Ma, ka anyị burugodị ụzọ hụ ka o si arụ ọrụ.
Kedu ka Bigbuy si arụ ọrụ?
Onye na-eweta ọrụ a na-agbachitere mkpa nke ndị ahịa ya niile, otu n'otu. Ha nwere katalọgụ ngwaahịa sara mbara maka ọtụtụ edemede, yana ọbụlagodi injin ọchụchọ site na aha mmado ma ọ bụ ụdị. Ihe bụ ihe ọzọ, edemede ya niile gụnyere SEO kachasị ọdịnaya. Ngwa oru gị dị mma, na nwere ike ibuga site na awa 24, na ohere nke inweta ngwaahịa ha na mbelata ego mgbe ị na-enye iwu maka ọnụ ọgụgụ buru ibu, ma ọ bụ na ọnụ ahịa onye nkesa ma ọ bụrụ na enye iwu otu onye.
Bigbuy nwere ibe weebụ abụọ, maka ọzụzụ na-aga n'ihu, nyere ndị ahịa ya aka, nkọwapụta nkọwapụta nke ngwaahịa ya, yana nkọwa gbasara ecommerce na ịda mba na ngwa bara uru maka ọrịre ahụ. Nnukwu blog, na mgbe e mesịrị Bulọ akwụkwọ Bigbuy.
Ndị ahịa nwere ike ibudata akwụkwọ ọnụahịa n'ịntanetị, na ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri ha na-arụ ọrụ na-enyere aka mee ka ọnụahịa dị ala dị ka o kwere mee, ka o kwere mee. Anyị ga-ekwu maka nke a ma emechaa. Ọzọkwa, ọrụ ahịa ya mgbe a na-ere ahịa, nke na-ahụ maka ịnata mbupu niile a jụrụ ajụ ma na-ahụ maka ijikwa ya, na-agbakwunye nkwa nke ngwaahịa, nke bụ ihe dị mkpa ma na-enye anyị ohere, dị ka ndị ahịa, ịghara ichegbu onwe gị banyere ya. .
Ozugbo arụ ọrụ nke ụlọ ọrụ ahụ lekwasịrị anya, ị nwere ike ịmalite ịtụle ókè anyị nwere mmasị ma ọ bụ na ọ kwesịrị ekwesị iji ya rụọ ọrụ. Dabere na echiche anyị na-agbaso, anyị ga-ahụ ma ọ bara uru ma ọ ga-egboro mkpa anyị.
Ihe niile Ọ dabere na onye na otu ị bụ na ihe ị tụrụ anya ya. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya ọtụtụ ihe ma chọọ ime ihe pere mpe, azịza ya bụ mba. Ọ bụrụ na ị tụrụ anya obere ma chọọ ime ike gị nile, azịza ya bụ ee. Uche a nwere ike iyi ihe nzuzu, mana ọ bụghị. M na-ekwupụta ya n'ihi na ọtụtụ ndị na-eche na ihe ahụ ga-adị mfe, na ha nwedịrị ike wepụta weebụsaịtị ha, nyefee onye nlekọta ahụ n'aka mmadụ, ma dabere na ngwaahịa buru ibu, ma nwee ihe niile akpaghị aka na ha ga-ebi n'enweghị nsogbu. Na mba, a priori i nweghi ike.
Kwesighi itinye ego buru ibu. Site na ịnweghị ngwaahịa, ị nwere ike ịkwado akụkụ siri ike nke itinye ego na Bigbuy.
Ka ị na-arụkwu ọrụ, otú ahụ ka ị ga-emesị nata n’ikpeazụ. O nwere ike ịbụ otu nsogbu megide, mana ọ bụrụ na ị na-adịgide adịgide, uru kwesịrị ịdị, ma dabere na mbọ gị.
A na-ahazi iwu gị ozugbo. Site na mgbe onye ahịa kpebiri ịzụrụ ngwaahịa rue mgbe ọ ga-anata ya, oge ahụ pere mpe, ma e jiri ya tụnyere onye ọzọ, onye ga-elebara gị anya dị ntakịrị ma nye gị ụgwọ karịa maka nnyefe.
Ego ị na-akwụ kwa ọnwa na-agbanwe agbanwe dabere na nke ngwugwu atọ ị họọrọ, site na nke kachasị mfe na nke zuru oke.
Ha nwere a katalogi emelitere.
E nwere nnukwu asọmpi. Ọ bụghị naanị gị na-enye ngwaahịa ndị a, yabụ ị ga-asọmpi megide ọtụtụ puku ndị ọzọ, dịka gị, ahọrọla Bigbuy iji nye otu ihe ahụ.
Onyinye azụmahịa na onyinye. You nwere ezigbo mbukpe? Nke ukwuu iji dị iche na ndị ọzọ? Isi okwu a maka m kachasị mkpa. Ma ọ bụ na ma ọ bụ na ị na-ere / mgbape na-ere, ma ọ bụ nro ahụ nwere ike ịmalite ịmalite.
Nkịtị. Ọ bụrụ na ị bụ onye kwụsiri ike, ị maara na na njedebe nke okporo ụzọ ahụ na-enwetakwu ọkụ nke ọma. Ọ bụrụ, n'aka nke ọzọ, ịrụsi ọrụ ike na obere ego mbata na-emebi gị, enwere ohere ndị ọzọ na-amasị gị karịa nke a. Nke a bụ ihe a na-ahụkarị ma dịkwa ebe niile, mmụọ nke onye ọ bụla nwere dị mkpa ebe a.
Ọ bụrụ na e nwere mkpesa, ị na-eri ya. Ndị mmadụ anaghị azụ ihe na Bigbuy, cheta, ha na-azụta n'aka gị. Mmebi ọ bụla dịnụ, nkatọ, igbu oge, ma ọ bụ ihe ọ bụla, ị ga-azarịrị arịrịọ na nghọtahie nke ndị ahịa ikpeazụ. Ọ bụrụ n ’ọ bụla agbasaghị gị, anyị tụlerela maka ya njikwa aha ịntanetị, otu esi emeso ndị ahịa na-enweghị afọ ojuju.
Forlọ maka imeghari. Bigbuy ga-azụrịrị ngwaahịa ha, ị na-erekwa ngwaahịa ahụ, nke a na-achọkwa ịkwụ ụgwọ n'etiti ha na gị (n'ihi na ọ bụ) ụgwọ. N'iburu n'uche ndị ọzọ na-asọmpi, ndị na-achọkwa ịbelata ọnụahịa nke ngwaahịa ha, kedu ohere ị ga-esi megharịa ahụ ka ị nwere?
Iji ghọta ahụmịhe nke iso buru ibu na-arụ ọrụ, ọ kacha mma ịnakọta echiche nke ndị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-arụ ọrụ na ha. Ndị a nwere ike ịbụ ụfọdụ n'ime ihe atụ ndị anyị nwere ike ịhụ. Enwere otutu di iche. Ihe niile bụ, dabere na echiche ndị ị nwere. Kpee onwe gị ikpe!
Na nke a, anyị nwere nwa nwoke. Obi tọrọ ya ụtọ, o guzobere ecommerce nke ya na prestashop. Echiche mbụ ya bụ ịzụta ngwaahịa tupu oge eruo n'aka ndị na-ere ahịa na-echekwa n'ụlọ. Nsogbu ya bụ na o biri na studio, ebe nchekwa dị obere, na ịkwakọ ngwaahịa ahụ bụ nnukwu oge. O nwere ndi enyi ya maara ya, otu n'ime ha nyere ya ezigbo echiche banyere Bigbuy. Mgbe ọ na-echeghị banyere ya nke ukwuu, ma tụlee na ọ chọrọ ịrara onwe ya nye na kichin ihe na Bigbuy nwere ezigbo akwụkwọ ndekọ aha, o kpebiri ịnwale.
Ọ nọrọ ọtụtụ oge na mbido, izu, ịtọlite ​​ihe n'ụzọ ziri ezi, na ịhọrọ ezigbo ọnụahịa na usoro mgbasa ozi. Mgbe e mesịrị, site n'enyemaka nke mkpọsa ụlọ ọrụ, ntọala ịkwụ ụgwọ, mkpọsa Adwords dị mfe, netwọkụ mmekọrịta, na ịkpọtụrụ blọọgụ ndị ọzọ iji kpọsaa, ha na-amị mkpụrụ. Ya onwe ya na-akọwa etu o si bụrụ ikpe na njehie mgbe niile. Ebe ọ bụ na ụfọdụ ihe na-arụ ọrụ nke ọma, ndị ọzọ adịchaghị mma.
Currently ugbu a na afọ ojuju na ọrụ ị na-arụ, na-agbalị ịnọgide na-mma ka i nwere ahịa.
Ikpe a na-adọrọ uche m. Achọtara m ihe otu nwatakịrị nwoke pụtara iji chebe Bigbuy, na-ekwu na ya na ha na-arụ ọrụ ọtụtụ afọ ma nwee oke obi ụtọ. "Ha dị ezigbo njọ, ha na-aza ozi-e mgbe niile, arụọla m ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ, ọ bụkwa ha kacha mma." Nzaghachi ya metụtara ndị kwuru na ha bụ ezigbo ndị na-eweta ngwaahịa, mana na ha na-aghọ aghụghọ, ndị ọzọ na ha bụ mkpofu, ụfọdụ na-ejighị ha arụ ọrụ nyere ọtụtụ ndị atụ. Na mkpokọta, nwatakịrị ahụ, onye na-ewe iwe na iwe, kwuru okwu ọma banyere ha ma maa ndị ọzọ mba, bụ ndị ọ kọwara dị ka "onye anyaụfụ."
Ọ ga-amasị m ịhụ ebe nrụọrụ weebụ gị, mana ọ gosighi ya. Echere m na n'otu akụkụ, iji zere itinye akụkọ ọjọọ. Ma n'okwu ọjọọ o kwuru, ahụrụ m ya dị ka ezi uche dị na ya. Ana m ekwu nke a n'onwe m.
Onye a abụghị ihe ọjọọ. Ọ mere mkpesa banyere Bigbuy, ọ bụ ezie na edoghị m anya, ma ọ bụrụ na ọ bụ banyere ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọdịda. Ọ wakporo ụlọ ọrụ ahụ n'echiche bụ na ahịa ahụ na-asọ mpi nke ukwuu, ọ nweghịkwa ohere maka ịgbagharị iji nwee ike ịnye ọnụahịa siri ike ọ ga-enwerịrị. Na njedebe ọ gaghị ekwe omume ị nweta ebe ọ bụla, na ọ bụrụ na Bigbuy na-enweta ọtụtụ ihe ma na-eme nke ọma, n'ikpeazụ ndị furu efu bụ ndị ahịa ya bụ ndị, dị ka ya, enweghị obere ego.
Anyị nwere ike ịhụ na ọ bụghị ihe niile na-egbu maramara bụ ọla edo. Kedu anyị na-eche ụlọ ọrụ siri ike ihu yana ahịa asọmpi ma buru ibu. Ebe a na-enweta ihe ịga nke ọma site na mgbalị, talent, yana iche iche atụmatụ. Na na na njedebe mkpebi ịmalite azụmahịa na-adaba na Bigbuy mmekorita ga-adabere na nke mbụ gbasara otu anyị si na etu anyị nwere ike ma chọọ ịga.
Ọ bụ eziokwu na asọmpi dị n'okporo ụzọ, mana ịnwe oke ngwaahịa na-akwụghị "ihe ọ bụla" maka ya bụkwa mgbakwunye. Ọ bụ nkwekọrịta dị mma, ihe nnọchianya, ka ọ bụ echiche ọjọọ? Azịza ya bụ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ga-adabere na ihe ịga nke ọma anyị nwere.
N'ọnọdụ ọ bụla, na dị ka mgbe niile, achọrọ m ka ị bụrụ ọkachamma na ọtụtụ ihe ịga nke ọma na ọrụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Ngwaọrụ » Dropshipping » Bigbuy azụmahịa ratings, echiche na arụmọrụ
Ahụhụ siri ike na ha.
Arụrụ m ọrụ ọnwa ole na ole, naanị ihe m mere bụ oge na ego.
Njikọ ahụ na Aliexpress malitere ida, ha were ihe karịrị ọnwa 2 iji dozie ya.
Tụkwasị na nke ahụ, ngwaahịa ndị ahụ dị obere, Aliexpress na-achịkwa mgbe niile maka ndị na-azụ ahịa, ha anaghị eburu ọrụ, ebe ọ bụ na ụbọchị ndị edepụtara maka nkwupụta ikike gafere.
Na icing na achicha ahụ bụ na ha boro m € 598.95 maka mmeghari ohuru nke m chere na akagbuola afọ gara aga mgbe m gwara ha na ederede na anaghịzi m eso ha arụ ọrụ, m wepụrụ ego ahụ obere akpa.
Ebuola m ikikere na Ocu.
Kpachara anya na ha.
Bigbuy fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ojoro.
Ọ dị mma, enwere m ahụmịhe na Bigbuy, enwere m ike ịgwa gị na ihe niile na-egbuke egbuke abụghị ọla edo, m ga-ahapụ ya ebe ahụ.
Kwalite akara ngosi akara site na foto nke webụsaịtị gị
Ofkpụrụ nke ụlọ ọrụ, ihe atụ, na otu esi etinye ha n'ọrụ